Tababar Lagu Soo Bandhigayay Caadooyinka Xun-xun - Cakaara News
Tababar Lagu Soo Bandhigayay Caadooyinka Xun-xun
Jigjiga (CN) Talaado, 29 December 2015,Tababar uu soo agaasimay Xafiiska Arimaha Hawweenka &Caruurta islamarkaana lagu soo bandhigayay daraasaad laga sameeyay gudniinka fircawniga ah iyo saamaynta uu kuleeyahay gabdhaha wakhtiga dhalmada ayaa saaka kabilawday holeka shirarka ee isla xafiiska.
Tababarkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay 130 qof oo kakalayimid ururada haweenka odayaasha dhakhaatiirta magaalooyinka Jijiga, Harar Dirdhaba iyo Goday, culima awdiinka, Garsoorayaasha Shareecada iyo waliba masuuliyiinta Golaha Arrimaha Islaamka DDSI, waxaana lagusoo bandhigayay daraasaad ku wajahan gudniinka fircawniga ah ee gabdhaha loo gaysto.
Hadaba daraasaadkan ayaa waxaa sameeyay qaar kamida dhakhaatiirta hopitaalka karamardha ee Magaalada jijiga. Kuwaasoo ku takhasusay dhinaca makaanka iyo dhalmada islamarkaana ka shaqaynayay mudo dhan 10 sano – 16 sano.
Hadaba tababarkan ayaa waxaa ugu horayn kahadlay Wasiir Kuxigeenka Xafiiska Arimaha Haweenka &Caruurta DDSI Mudane Cabdi-fataax Maxamed Gamaadiid waxuuna sheegay in daraasaadkan ay sameeyeen dhakhaatiirtu uu yahay mid xaqiiqda ka turjumaya islamarkaana ay muhiim tahay in aan ladagaalano caadooyinka xunxun sida gudniinka fircawniga ah, waxa una hadalkiisi ku gaba gabeeyay in kaqayb galayaashu ay usii gudbiyaan goobihii iyo xaafadihii ay ka kala yimaadeen.
Sidookale waxaa kulankan ka hadlay Sheekh Sayid Nadiir Sayid Nuur Gudoomiyaha Maxkamada Arimaha islaamka DDSI waxuuna sheegay in gudniinka fircawniga ahi uu yahay mid aan banaanayn Diinta Islaamka islamarkaana ay tahay in laga hortago inagoo iskaashanayna culimo awdiin ahaan iyo bulsho ahaanba, Waxaa kale oo uu hadalkii sii ku daray in dhibaato farbadan uu gabdhaha u gaysto wakhtiga dhalmada
Ugu danbayna waxaa kahadlay kusimaha Agaasinka Waaxda Sinaanta Jinsiga ee Xafiiska Arimaha Haweenka & Caruurta Marwo Sahra Cabdi Samatar oo sheegatay in tababrkan ay iska kaashadeen fulintiisa Xafiiska & Haaayada Caalamiga ah ee (ODWACE) islamarkaana uu kamidyahay dadaalada balaadhan ee uu xafiisku ugu jiro ladagaalanka iyo kahortaga caadooyinka xunxun.